တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်နေ့အတွက် ဒေသနာတော် ဒေါက်တာအရိပ်၊အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်၏ | Real Conversion
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်နေ့အတွက် ဒေသနာတော်
၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၂ရက်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Evening, January 22, 2012
“သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် တားဆီးနှိပ်စက်သောသူတို့ ပြုတတ်သောဘုရားမဲ့နေခြင်း အမှု၊ တရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးတို့တဘက်၌ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား သိအပ်သောဘုရားသခင်၏အကြောင်း အရာတို့သည် သူတို့တွင် ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား ပြတော်မူ ပြီ။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့်ထာ၀ ရတန်ခိုးတော်နှင့်ထာ၀ရအဖြစ်တော်တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏အ ရာတို့သည်ကမ္ဘာတည်သည်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျှက်ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်ရာ။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုသိလျှက် ပင်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည် အတိုင်းမချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ် အချည်းနှီးတွေးဆခြင်း၊ သတိရှိမရှိသောစိတ်နှလုံး မိုက်မဲ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ပညာရှိ ယောင်ဆောင်လျှက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌တည်သည်ဖြစ်၍၊ မဖေါက်ပြန်မဖျက်စီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျှက်၊ ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော လူ၏ရုပ်တုသား ငှက်အစရှိသောတွားတတ်သော တိရိစ္တာန်၏ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင်အရာ၌ ချီးမြောက် ကြ၏(ရောမ ၁း၁၈-၂၃)။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သည် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ အလွန်အင်မတန်အရေးပါသော ပွဲတော်ဖြစ်ပါ သည်။ ၎င်းသည် လူသားသမိုင်းအစဉ်လိုက် ခေတ်ကာလအစဉ်ထားသော ပြက္ခဒိန်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခရစ်တော်သခင်ကြွမလာခင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော် ၊ဟောင်တီ ဧကရာဇ်ဘုရင်က ပထမဦးစွာသော ပြ က္ခဒိန်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်ကဲ့သို့ တရုတ်ပြက္ခဒိန်သည်လည်း တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေလျှက်ရှိပါသည်။ အနောက်တိုင်းပြက္ခဒိန်နှင့်မတူညီသော အချက်မှာ တရုတ်ပြက္ခဒိန်သည်လ၏ စက်ဝိုင်းကိုအခြေခံ၍ တွက်ချက်ပြီးထုတ်ဝေလျှက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးသည် နှစ်စဉ်ဇန်နပါရီလကုန်ပိုင်းနှင့် ဖေဖော်ပါရီလလယ်တွင် ကျရောက်တတ်သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပါတော့မည်။ ရိုးရာယာဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရ ပွဲတော်ကိုနေရာတကာမှာ ခင်းကျင်းပြနေကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ပ်အဖို့သင့်တော်သော မိတ်ဆုံ စားပွဲကြီးကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူး မတိုင်ခင်ယနေ့ညတွင် ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်သည်။
လနှင့်ဆိုင်သော ပတ်လမ်းကြောင်းလည်ပတ်ရာတွင် အနှစ်၆၀ပတ်တိုင်း၊ ၁၂နှစ်လျှင်၅ကြိမ် ပတ်ပြီးကြောင်း တွက်ချက်ကြသည်။ တရုတ်အမျိုးသား လနှင့်ဆိုင်သောပြက္ခဒိန်ကို ၁၂နှစ်တိုင်းအတွက် နို့တိုက်သတ္တဝါများနှစ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသဖြင့် တွားသွားသတ္တဝါများ(သို့) ငှက်များ၊ ကြွက်၊ နွားထီး၊ ကျား၊ ယုန်၊ နဂါး၊ မြွေ၊ မြင်း၊ သိုး၊ မျောက်၊ ကြက်ဖ၊ ခွေးနှင့်ဝက်ဟူ၍ နှစ်ကိုသတ်မှတ်ကြသည်။ ယခုနှစ်(အေဒီ ၂၀၁၂)နှစ် နဂါးနှစ်ယူ၍ သတ်မှတ်ကြသည်။
ဤပုံစံနှစ် ပြက္ခဒိန်အရ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို တရုတ်လူမျိုးများ လွှမ်းမိုးသောတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီး တို့တွင် နှစ်သစ်မင်္ဂလာပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါသည်။ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂျာပန်နိုင်ငံ(၁၈၇၃ ကတည်းက) ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံ၊ မွန်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံ၊ စကာပူနိုင်ငံ၊ တိုင်ဝမ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ စသောနိုင်ငံအသီးသီးတို့၌ ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြပါသည်။ အီရန်နိုင်ငံကဲ့သို့ အရှေ့ အလယ်နိုင်ငံများတွင်လည်း တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကျင်းပလျှက်ရှိပါသည်။
နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတည်းက ရှေ့ဟောင်း၊ ဒဏ္ဏရီအရသော်လည်းကောင်း၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အရသော်လည်းကောင်း၊ “နှိမ်”ဟူသော ကြမ်းတမ်းသောနဂါးသည် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်အကြိုညတွင်လူ သားကို စားတတ်သည်ဟူ၍ တရုတ်လူမျိုးများယုံကြည်လျှက်ရှိသည်။ “နှိမ်” ဟူသည်ယနေ့ခေတ်တွင် ကြမ်းတမ်းသောနဂါးဟူ၍ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းနဂါးကို အနီရောင်အဝတ်ဝတ်ဆင်လျှက် အနိုင်ယူတတ်သည်ကို ယနေ့နှစ်သစ်ကူးပွဲနေ့တွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအဖြစ်သရုပ်ဖေါ်ပြသကြသည်။ ဤသည် ရှေ့နှစ်ပေါင်းကတည်း က တရုတ်လူမျိုးတို့၏ အသိညာဏ်၌ စာတန်ဆိုးက အလုပ်လုပ်နေ၍ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ တော်က စာတန်ကို အောက်ပါအတိုင်း ခေါ်ဆိုပါသည်။
“စာတန်အမည်ရှိသော ရှေးမြွေဟောင်းနဂါးကြီးကို၎င်း၊ သူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်သို့ ချလိုက်ကြ၏(ဗျာဒိတ် ၁၂း၉)။
သို့သော်လည်း စာတန်သည် အနီရောင်ဖဲကြိုးများ၊ မီးတောက်မီးလျှံကို မကြောက်တတ်ပါဘူး! ၎င်းအနီရောင်သည်နဂါးကြီးကို အနိုင်ယူဖို့ဆိုရာတွင်၊ အသွေးတော်ဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ရည်ညွန်းနေပြီး ခရစ်တော်သခင်၏ အသွေးတော်ကို ကိုယ်စားပြုနေပါသည်။ နုတ်ကပတ်တော်၌လာသည်ကား “သိုးသ ငယ်၏အသွေးတော်အားဖြင့်” (ယေရှုခရစ်၏အသွေး)အားဖြင့် စာတန်ကိုအနိုင်ယူနိုင်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၂း၁၁)။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သည် အဘယ်ပုံအဘယ်နည်းအားဖြင့် ဖြတ်သန်းကြပါစေ၊ တကယ် တန်းကျတော့ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး၄ရက်အားဖြင့် ဖြတ်သန်းနေခြင်းဖြစ်သည်ကို နား လည်ကြရပါမည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုဖို့ကျွန်ပ်ကို ဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်ခံရသောအခါ၊ ကျွန်ပ်လည်းပထမ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာတီမောသေလင်းအားဖြင့် သာသနာအတွေ့အကြုံ ကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ထိုဆရာကြီးသည် တရုတ်ကျမ်းစာကျောင်း၌ ဘာသာစကားဗေဒ ကိုသင်ကြားသူပါ။ သူသည် ဘောတ်ဂျူံးတက္ကသိုလ်က ကျောင်းဆင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀-၁၆၇၀ ကြားကျွန်ပ်အားပညာသင်ပေးသော အသင်ဆရာလည်းဖြစ်သလို၊ ကျွန်ပ်၏ သင်းအုပ်ဆရာကြီးတပါး လည်းဖြစ်သည်။ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံဧဝံဂေလိတာဝန်ခံ ဒေါက်တာ ဂျိမ်းဟုတ်ဆန်တေလာ ၃ နှင့်အတူ တရုတ်ကို သာသနာပြုသွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ဟာမီတန်စကွီးယား နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သင်းအုပ်၊ ဒေါက်တာဒေးဝိဒ်အိန်နက်စ် လည်း၊ ဒေါက်တာလင်းကို ဘောတ်ဂျူံးတက္ကသိုလ်၌ သိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာအိန်နက်စ်က ကျွန်ပ်အား ရောမ ၁း၁၈-၃၂ ပါတ်သတ်သော၊ ဒေါက်တာလင်း၏ ကျမ်းကိုးကားချက်များကို ပေးအပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ကျမ်းညွန်းနံပါတ်တစ် (၁) ရောမ ၁း၁၈-၂၀ အလင်းတန်းကိုဖေါ်ပြခြင်း(၂)ရောမ ၁း၂၁-၂၅ အလင်းကို ငြင်းဆန်ခြင်း(၃)ရောမ ၁း၂၆း၃၂အလင်းကို ရွှေ့သွားခြင်းဟူသော အချက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ သို့ သော်လည်းအချက်(၄)ချက်ဖြင့် အဆုံးသတ်ပါမည်။
၁။ ပထမ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် တဆူတည်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်သောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာလင်းက တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့သည် တဆူတည်းသောဘုရား ကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ဒေါက်တာလင်းညွှန်းထားသော ရောမ၁း၁၈-၂၀ ကျမ်းပိုဒ် ကို ဒေါက်တာချန်မှ မကြာသေးခင်က ဖတ်ကြားခဲ့သည်။
“သမ္မာတရားကိုအဓမ္မဖြင့် ဆီးတားနှိပ်စက်သောသူတို့၊ ပြုတတ်သောဘုရာမဲ့နေခြင်းအမှု တရားကို လွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့ တဖက်၌ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည်ကောင်း ကင်မှထင်ရှားလျှက်ရှိ၏ အဘယ်ကြောင်းနည်းဟူမူကား၊သိအပ်သောဘုရားသခင်၏အကြာင်း အရာတို့သည် သူတို့တွင်ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူပြီ။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့်၊ ထာ၀ရတန်ခိုး တော်နှင့်ထာ၀ရအပြစ်တော်တည်းဟူသော မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်း၏ အရာတို့သည် ကမ္ဘာတည်သည်ကာလမှစ၍ ထင်ရှားလျှက်ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည်ကိုယ့်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်ရာ (ရောမ ၁း၁၈-၂၀)။
ဤသည် ရှေးအဆက်ဆက်၌ အဘယ်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသော ပုံရိပ်များပင်ဖြစ်သည်။ နဂိုမူလအားဖြင့်၊ လူသားမျိုးနွယ်စုတခုလုံးသည် ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ကြ သည်။ “မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် ဘာသာတစ်မျိုးတည်း၊ စကားတစ်မျိုးတည်းရှိကြသည်ဖြစ်၍” (ကမ္ဘာဦး၁၁း၁)။ သို့ပါသော်လည်း အပြစ်ဝင်လာသောအခါ၊ ဗါဗုလုန်ရဲတိုက်ကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြ၏၊ “သို့ဖြစ်၍ ထိုမြို့၌ထာ၀ရဘုရားသည် မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကို ရှုတ်ထွေးစေ၍၊ သူတို့ ကိုမြေကြီးတပြင်လုံး၌ အရပ်ရပ်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့် ထိုမြို့သည်ဗါဗုလုန်မြို့ဟူ၍တွင်သတည်း (ကမ္ဘာဦး ၁၁း၉)။
ဗါဗုလုန်ရဲတိုက်ကြီးမှလူအပေါင်းတို့သည် အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြသောအခါ၊ အချို့သောသူတို့ သည် အခုတရုတ်နိုင်ငံဟုခေါ်တွင်သော ကမ္ဘာ့အရှေးဘက်ခြမ်းသို့ ခရီးနှင်ခဲ့ကြ၏။ (၁၈၁၅-၁၈၉၇)ခုနှစ် ဒေါက်တာဂျိမ်းလက်ခ်ျသည် တရုတ်လူမျိုးအကြောင်းလေ့လာဆည်းပူးသော ပညာရှင်တဦးဖြစ်သည်။ သူ သည်အောဖ်စဖေါ့တက္ကသိုလ်၌ တရုတ်စကားနှင့်စာပေကို နှစ်နှစ်ဆယ်တိုင်သင်ကြားပေးသူဖြစ်သည်။ သူ ၏စာအုပ်ဖြစ်သော Thန Rနူငါငသညျ သ် ဃ့ငညa ဟူသောစာအုပ်၌ဒေါက်တာလက်ခ်ျ ကောက်နုတ်တင်ပြ ထားသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသည် (mသညသအ့နငျာ) ဟူသော တဆူတည်းသောဘုရားကို ယုံကြည်သောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်ဟူ၍ဆို၏။ ထိုဘုရားကို (Shညေါ Tင) (ကောင်းကင်ဘုံအရှင်)ဟုခေါ်ကြသည်။ ဒေါက်တာလက်ခ်ျ ကနဂိုကတည်းက တရုတ်လူမျိုးတို့သည် ခရစ်တော်မပေါ်မှီနှစ်နှစ်ထောင်ကတည်းက တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် ကွန်ဖူးရှပ်မပေါ်ခင် ၁၅၀၀နှစ်လောက်ကဖြစ်သည်။ (၅၅၁-၄၇၉ဘီစီ)၊(၅၆၃-၄၈၃ဘီစီ)တွင် ဗုဒ္ဓသည်မွေးဖွါးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အခြားတပါးသော ဘာသာတရားဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ဖူးရှပ်ဘာသာ သည် ဘာသာတရားတခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်သာဖြစ်သည်။ ရှေကကျသော တရုတ်လူမျိုးတို့သည် တဆူတည်းသော ရှောင်တီဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဤသည် ကွန်ဖူးရှပ်မတိုင်ခင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမဝင်ခင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ကျော်ကပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ပါသော်လည်း ရှေးရိုးရာစိတ်ဝိညာဉ်များကရှောင်တီဘုရားကို (Shညေါ Tင) ကိုးကွယ် နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ရှေးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို စိတ်နှလုံးသားထဲ စွဲထင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလက်ခ်ျ၏ အတွေးအမြင်သည်လည်း ဒေါက်တာဝီလ်ဟန်ခမိ၏ အမြင်နှင့်အတူအတူပင်ဖြစ် သည်။ The Religions of China ဟူသောစာအုပ်၌ဒေါက်တာလက်ခ်ျ ကောက်နုတ်တင်ပြ ထားသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသည် (mသညသအ့နငျာ) ဟူသော တဆူတည်းသောဘုရားကို ယုံကြည်သောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်ဟူ၍ဆို၏။ ထိုဘုရားကို (Shညေါ Tင) (ကောင်းကင်ဘုံအရှင်)ဟုခေါ်ကြသည်။ ဒေါက်တာလက်ခ်ျ ကနဂိုကတည်းက တရုတ်လူမျိုးတို့သည် ခရစ်တော်မပေါ်မှီနှစ်နှစ်ထောင်ကတည်းက တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် ကွန်ဖူးရှပ်မပေါ်ခင် ၁၅၀၀နှစ်လောက်ကဖြစ်သည်။ (၅၅၁-၄၇၉ဘီစီ)၊(၅၆၃-၄၈၃ဘီစီ)တွင် ဗုဒ္ဓသည်မွေးဖွါးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်လာခဲ့ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အခြားတပါးသော ဘာသာတရားဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ဖူးရှပ်ဘာသာ သည် ဘာသာတရားတခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်သာဖြစ်သည်။ ရှေကကျသော တရုတ်လူမျိုးတို့သည် တဆူတည်းသော ရှောင်တီဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဤသည် ကွန်ဖူးရှပ်မတိုင်ခင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမဝင်ခင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၁၅၀၀ကျော်ကပင်ဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်ပါသော်လည်း ရှေးရိုးရာစိတ်ဝိညာဉ်များကရှောင်တီဘုရားကို (Shညေါ Tင) ကိုးကွယ် နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ရှေးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို စိတ်နှလုံးသားထဲ စွဲထင်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလက်ခ်ျ၏ အတွေးအမြင်သည်လည်း ဒေါက်တာဝီလ်ဟန်ခမိ၏ အမြင်နှင့်အတူအတူပင်ဖြစ် သည်။ (The Origin and Growth of Religion, Cooper Square Publishers, 1972 edition). ရှောင်တီ၊ ကောင်းကင်ဘုံအရှင်သည် တရုတ်လူမျိုးတို့၏ ရှေပအအဆက်ဆက် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသောဘုရားဖြစ်သည်! ကျေးဇူးပြု၍ သီးချင်းနံပါတ်(၆)၏ ပထမစာသားကိုသီဆိုကြစို့။
-ငါ့ဝိညာဉ်ဘုရားရှင်ကို ချီးမွမ်းပါ၊ သခင်ခြေတော်ရင်း၌ထူးထောက်အစဉ်
ရွေးနုတ်၊ ကယ်တင်ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပြီ ထိုအရှင်ကဲ့သို့တုနှိုင်းဖွယ်ရှိအံ့နည်?
ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းလော့!
ထိုအရှင်သည် ရှောင်တီအရှင်ဖြစ်တယ်၊ ကောင်းကင်ဘုံအရှင်ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ခရစ်တော်၏ ခမည်းတော်အရှင်မြတ်ဖြစ်သည်။!
၂။ ဒုတိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည်ဘုရားအများကိုးကွယ်သောနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် တရုတ်လူမျိုးများသည် ရှောင်တီဘုရား၊(ကောင်းကင်အရှင်) တဆူတည်း သောဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းမှ ဘုရားအများကိုးကွယ်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲနေခဲ့ကြသည်။ ဤဒေသနာတော်မ တိုင်ခင်က ဒေါက်တာချန်ဖတ်ကြားခဲ့သော နုတ်ကပတ်တရားတော်၌ လာသည်ကား၊
“အကြောင်းမူကာ၊ ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိလျှက်ပင်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့် သည်အတိုင်းမချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမသိမမှတ် အချည်းနှီးတွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသောစိတ်နှ လုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ပညာရှိ ယောင်ဆောင်လျှက်နှင့်လူမိုက်အရာ၌ တည်ကြ သည်ဖြစ်၍၊ မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင် သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျှက်၊ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော လူ၏ရုပ်တ သားငှက်အစရှိသော တွားတတ်သောတိရိစ္ဆာန်၏ ရုပ်တုတို့ကိုဘုရားသခင်းအရာ၌ချီး မြောက်ကြ၏။ (ရောမ ၁း၂၁-၂၃)။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်သမျှသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပျက်လျှက်ရှိသော အရာများသာဖြစ်သည်။ ရှေးယခင်က တရုတ်လူတို့သည် တဆူတည်းသောဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်(ရှောင်တီ)ကောင်းကင်ဘုံ အရှင်ဟူ၍ ခေါ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အခြေချနေထိုင်ခဲ့သူတို့သည်လည်း တဆူတည်း သောဘုရားကိုသာ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အမေရိကတိုက်ကို ရှာဖွေခရီးသွားနေကြသူတွေပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခြင်းကို ရလိုသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သည်။ ပထမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခဲ့စဉ်က၊ ဘုရားရှင်သည် သူတို့ကိုကွယ်ကာခဲ့ခြင်းနှင့် ထောက်မကူညီခြင်းအ တွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ ယနေ့နှစ်၄၀၀ကျော်လွန်သောအခါ၊ အမေရိကန်လူမျိုးများသည် အရာရာအတွက် ဘုရားနှင့်မပတ်သတ်တော့ဘူးဟူ၍ အတွေးဝင်နေကြပြီ။ ယနေ့တွင်၊အမေရိကန်လူမျိုးတို့ သည် တစိမ်းဆန်သောယုံကြည်ခံယူမှုနှင့် ယုံမှားသောဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ နောက်လိုက်နေကြပြီဖြစ် သည်။ အများသောအမေရိကန်လူမျိုးတို့သည် ဘုရားရှင်အမှန်တကယ်တည်ရှိခြင်းကို မယုံကြည်ကြတော့ ပေ။ နှစ်၄၀၀နောက်ပိုင်းက အမေရိကန်သားများကသာ တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေးယခင်က တရုတ်လူမျိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခုဆိုလျှင်သူတို့လည်းမှားယွင်းသော ဘုရားအများ နောက်သို့လိုက်နေကြပြီ။ အများသောအမေရိကန်လူမျိုးများတွေဟာ “ကြက်ဆင်နေ့” အတွက်တာကျေးဇူး တော်ချီးမွမ်းနေကြပေပြီ။ ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းမည့်အစား ကြက်ဆင်၏အသားကိုသာ ၀အောင်စားကြပြီး ဘီယာသောက်ကာ Tဠ ကြည့်ကြတော့၏။ တရုတ်လူမျိုးများကဲ့သို့၊ စစ်မှန်သော ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်း မှရပ်တန်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
“ပညာရှိယောင်ဆောင်လျှက်နှင့်လူအမိုက်အရာ၌ တည်ကြသည်ဖြစ်၍၊ မဖောက်ပြန်မပျက် စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျှက်၊ ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ ရုပ်တု၊သားငှက်အစရှိသော Gm;တတ်သောတိရိစ္ဆာန်၏ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင်းအရာ၌ ချီးမြောက်ကြ၏။ (ရောမ ၁း၂၂-၂၃)။
၃။ တတိယ၊တရုတ်နိုင်ငံသည် ဘုရားမဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။
၁၉၄၉၊ အောက်တိုဘာ၁၊ ရက်နေ့တွင် မော်စီကုန်းနျင့်ကွန်မြူနစ် အင်အားစုများက တရုတ်နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ mသa- မော်ကို ခရစ်ယာန်သာသနာပြုဆရာများက “ဝိညာဉ်ရေးရာကိုရန်စသူ” ဟု ခေါ်ခံရသည်။ နောင်၁၀နှစ် ရောက်သောအခါ နိုင်ငံခြားသားသာသနာပြုဆရာများသည် ကွန်မြူနစ်တို့ ၏ရန်လိုမှု၊ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံခြားသာသနာပြုဆရာ များပြန်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင်၊ ပြည်တွင်းခရစ်ယာန်များ အားညှင်းပန်းနျိပ်စက်မှု တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ လူအမြောက်အများသေကြေကြသည်။ အခြားသောသူတို့သည် ထိုင်ဝမ်သို့ပြေးခဲ့ကြသည်။ ထောင်ပေါင်း များစွာသော တရုတ်ခရစ်ယာန်များသည် အဖမ်းခံရကြပြီး ထောင်ထဲသွင်းချခြင်းကို ခံရကြသည်။ အနည်း ငယ်တို့သည် အံ့ဩဖွယ်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ အသက်ရှင်လျှက်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၀ခုနှစ် တွင်မော်စီတုန်းသည် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၇၂ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ သမ္မတနိဇွန်တက်လာသည်အထိ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတံခါးကို ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ သမ္မတနီဇွန်၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် အရေးပါအရာရောက်သော သမိုင်းအ လှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နောင်တွင် တမ္မတနီဇွန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် နောင်လာ နောက်သားများကို အတုယူဖွယ်ရလဒ်တခု အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့၏။ တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင်၊ အမျိုးမျိုးအ ကြောင်းကြောင့် တိုးတက်မှုရှိစေခဲ့သည်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးပြည့်၀မှုရှိစေ ခဲ့သည်။ သူသည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုသို့ အလယ်သွားရောက်ခဲ့သော ပထမသမ္မတတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ ပြီး၊ သမ္မာရီကန်လုပ်ရက်ကြောင့် အစိပ်စိပ်အမွှာအမွှာ လွဲခဲ့ရသော (မကောင်းဆိုးဝါးအင်ပါယာ) အမှုကိစ္စ ကို ပြန်ဖါထည့်ပေးနိုင်သော သမ္မတဖြစ်သည်။ နီဇွန်သည် ကမ္ဘာကြီးကို အပြောင်းအလဲ ပြောင်းလဲ စေခဲ့သော သမ္မတဖြစ်သည်။ ထိုသမ္မတမရှိပဲ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လည်းအဆက်အသွယ်ရှိနိုင်မည်မထင်! တရုတ်နိုင်ငံမှ ဤအမေရိကန်သို့ ပညာသင်ကြသောကျောင်းသားများပင်လည်း သမ္မတနီဇွန်မရှိပဲ ဤနေ ရာ၌ လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ! သင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ အလယ်သွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ!
နိုင်ငံခြားသားသာသနာပြုဆရာများ မရှိသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းခရစ်ယာန်များသည် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ အနာသရဖြစ်အောင် ရိုက်နက်ခြင်း၊ စသဖြင့်တရုတ်န်ိုင်ငံတွင် အသက်ရှင်ရခဲ့ကြသည် (Source: China: The Blood-Stained Trail, Riley K, Smith, The Voice of the Martyrs, 2008, pp. 62-63).
ဘုရားမဲ့ဝါဒီသမား ကွန်မြူနစ်တို့သည် သမ္မာတကျမ်းစာတော်ကို မေ့မေ့လျှော့လျှော့မေ့နေကြသည်။
“ဘုရားသခင်မရှိဟု မိုက်သောသူတို့သည် ထင်တတ်၏ (ဆာလံ ၁၄း၁)။
ဘုရားအများရှိခြင်း၊ ဘုရားမဲ့ခြင်းဖြစ်သော ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများကို သမ္မာကျမ်းစာတော်က “မိုက်မဲ့ခြင်း” ဟူ၍ ခေါ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဘယ်သူမျှ ဘုရားသခင်ကိုအသေ မသတ်နိုင်၍ဖြစ်သည်! သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ထာ၀ရ” ဟူ၍ခေါ်ထားပါသည်(တရား ၃၃း၂၇)။ ဤသည် ကျွန်ပ်တို့ကို အချက်(၄)ချက်ကို ပို့ဆောင် ပေးပါသည်။
၄။ စတုတ္ထ၊ အခုဆိုလျှင်၊ တရုတ်နိူင်ငံသည်တဆူတည်းရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲလာ ကြပြီဖြစ်သည်။
ပရောဖက်၊ ယေရမိကအံ့ဩဖွယ် ဤကဲ့သို့ ဖေါ်ပြရေးသားထားပါသည်။
“အို ထာ၀ရဘုရား . . .တပါးအမျိုးသားတို့က ၊အကယ်စင်စစ် အကျွန်ပ်တို့ ဘိုးဘေးတို့ သည် မုသာ၊ အနတ္တ၊ အချည်းနှီးသောအရာတို့ကို အမွေခံကြပါပြီဟု မြေကြီးစွန်းမှကိုယ် တော်ထံသို့ လာ၍လျှောက်ကြပါလိမ့်မည် (ယေရမိ ၁၆း၁၉)။
ထို့အပြင် ပရောဖက်ယေရမိက တပါးအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ယေရှုအားဖြင့် အဖခမည်းတော်ဆီ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြမည်ကို ကြိုတင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အခြားသောပရောဖက် ဟေရှာယသည်လည်း နောက်ဆုံးသောကာလ၌ တရုတ်လူမျိုးများတို့သည် ခရစ်တော်သခင်ထံချဉ်းကပ် လာကြမည်ဟု မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
“ကြည့်ရှုလော့၊ ဤသူသည် ဝေးသောအရပ်မှလာကြလိမ့်မည်။ ကြည့်ရှုလော သူတို့သည် မြောက်မျက်နှာနှင့် အနောက်မျက်နှာမှ ၎င်း၊ထိုသူတို့သည်လမ်း သိနိမ်ပြည်မှ၎င်းလာကြ လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏(ဟေရှာယ ၄၉း၁၂)
''Sinim" ( နာမ်စား see-neem) ဤသည် အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွင် တရုတ်လူမျိုးများကို ရည်ညွန်းထား သည်ဘရောင်း၊ ဒရိုက်ဗါးနှင့် ဘရိတ်စ်၊ ဂျင်ဆီးနီးစ်၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဂီးလ်နှင့် ဒေလိဆက်နှင့် တရုတ် ပြည်သာသနာပြုဆရာဒေါက်တာ ဟုတ်ဆန်တေလာတို့၏ အနက်ဖွင့်ကျမ်း၌ တွေ့ရပါမည်။
ဟေရှာယ ၄၉း၁၂ သည် အရေးကြီးသော ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ ၌ တရုတ်လူမျိုးတို့သည် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ထံ ပြောင်းလဲလာကြမည်ကို ကြိုတင်ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ ကြီးမားသောဝိညာဉ်နိုးထမှု ခေတ်သစ်သမိုင်းမှတ်တိုင် စိုက်ထူစရာ ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်နာရီလျှင်လူပေါင်း ၁၀၀၀နှုန်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည် ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်! စဉ်းစားကြည့်သော် !တနေ့လျှင် လူပေါင်း၂၄၀၀၀ခန့် ခရစ်ယာန်အဖြစ်ပြောင်း လဲနေပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်း ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေသည် ယနေ့အမေရိကန် နိုင်ငံ၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေသော သူတို့ထက်များနေပါသည်။ ကနေ့ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် ဥရောပတိုက် အသီးသီး၌ တနင်္ဂနွေ ဘုရားကျောင်းလူဦးရေထက်များနေပါသည်။ သန်းပေါင်းများစွာ ဘုရားသခင်ထံ တရုတ်လူမျိုးများ ချဉ်းကပ်လာကြပြီး အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေကြပြီဖြစ်ကြပြီး သက်သေခံပါသည်။
ခရစ်တော်သည် လူအပေါင်းတ်ုdYအား မိမိတို့အရှင် သခင်ဘုရားသခင်ထံ အမှန်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ ကျွန်ပ်တို့ဘိုးဘေးကိုးကွယ်ခဲ့သော ဘုရားသခင်သည် ထိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်သည။ ခရစ်တော် သည် ၊ကျွန်ပ်တို့အား ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးaနေပါသည်။ ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားတို့ ၏ အပြစ်ကြွေးရှိသမျှအားလုံးအဖို့ ယေရှုဘုရားပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသစ်သော မွေးဖွားခြင်းနှင့် ထာ၀ရအသက်ကို ပေးအပ်ဖို့ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည်သင့်အသက်တာ ပြောင်းလဲလာဖို့နှင့် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်လာဖို့ သင့်အဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သီ ချင်းစာအုပ်၏ နံပါတ်(၆) ပထမအပိုဒ်ကို မတ်တပ်ရပ်လျှက်သီဆိုကြပါစို့!
သာ၍သိသာရှင်းလင်းသော ဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိသည်။ ယေရှုသခင်ကို မိမိ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သိရှိခြင်းနှင့် အရှင်သခင်ဖြစ်ခြင်းကို သိနားလည်ခြင်းသည် ဤလောကချမ်းသာ စည်းစိမ်ထက် သာလွန် ကြီးမြတ်လွန်းလှပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းသာယာ အိပ်စက်အနားယူခြင်းကို ငွေဖြင့်ဝယ်မရ
ယေရှုသည် သင်နှင့်ရှိသော် ဝိညာဉ်ချမ်းသာရ၏
ရွှေ၊ ငွေရတနာချမ်းသာခြင်းလည်း အစဉ်ရှိမူမည်
(“လောကီစည်းစိမ်” ၁၉၅၉ ခုနှစ် အာတာစမက်စ် သီကုံးရေးသားသည်။)
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ၊ ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ ရောမ ၁း၁၈-၂၃ ကိုဖတ်ကြားပေးသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ -၁၉၂၂-ရီးယားအက်မ်မီလာမှ စာသားရေး သားပြီး ၊၁၉၀၉-ဂျော့ဘယ်ဝါရီ ရှီးယား မှ သံစဉ်ထည့်ထားသော “ကျွန်ပ်၌ ယေရှုရှင်ရှိ၏” ဟူသောသမ္မ သီချင်းကိုသီဆိုသည်။
“သမ္မာတရားကို အဓမ္မဖြင့် တားဆီးနှိပ်စက်သောသူတို့ ပြုတတ်သောဘုရားမဲ့နေခြင်း အမှု၊ တရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးတို့တဘက်၌ အမျက်တော်သည် ကောင်းကင်မှ ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား သိအပ်သောဘုရားသခင်၏အကြောင်း အရာတို့သည် သူတို့တွင် ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား ပြတော်မူ ပြီ။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကို ထောက်ရှုသဖြင့်ထာ၀ ရတန်ခိုးတော်နှင့်ထာ၀ရအဖြစ်တော်တည်းဟူသော sက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏အ ရာတို့သည်ကမ္ဘာတည်သည်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျှက်ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်ကို မဖုံးနိုင်ရာ။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုသိလျှက် ပင်၊ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည် အတိုင်းမချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ် အချည်းနှီးတွေးဆခြင်း၊ သတိရှိမရှိသောစိတ်နှလုံး မိုက်မဲ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ပညာရှိ ယောင်ဆောင်လျှက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌တည်သည်ဖြစ်၍၊ မဖေါက်ပြန်မဖျက်စီးနိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျှက်၊ ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သော လူ၏ရုပ်တုသား ငှက်အစရှိသောတွားတတ်သော တိရိစ္တာန်၏ရုပ်တုတို့ကို ဘုရားသခင်အရာ၌ ချီးမြောက် ကြ၏(ရောမ ၁း၁၈-၂၃)။
၁။ ပထမ၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် တဆူတည်းသောဘုရားကိုကိုးကွယ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရောမ ၁း၁၈-၂၀၊ ကမ္ဘာ ၁၁း၁-၉
ဆာလံ ၁၄း၁၊ တရားဟော ၃၃း၂၇
၄။ စတုတ္ထ၊ အခုဆိုလျှင်၊တရုတ်နိုင်ငံသည် တဆူတည်းရှိတော်မူသော ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲလာ ကြပြီဖြစ်သည်။ ယေရမိ ၁၆း ၁၉၊ ဟေရှာယ ၄၉း၁၂